Tsindrona Ivermectin, Amoxicillin ho an'ny tsindrona - Lihua
Albendazole dia anthelmintic synthetic izay an'ny vondrona benzimidazole-derivatives miaraka amin'ny hetsika manohitra ny kankana marobe ary amin'ny ambaratonga fatra avo kokoa ihany koa amin'ny dingana ho an'ny olon-dehibe amin'ny fluke amin'ny atiny. Hetsika ara-panafody Albendazole miaraka amina proteinina microtubule eelworm ary mitana andraikitra. Aorian'ny albenzene ampiarahina amin'ny β- tubulin, dia afaka misoroka ny fihenan'ny albenzene sy ny α tubulin mivondrona ao anaty microtubules. Ny mikrotubula no firafitra fototry ny ...
Indications Manatsara ny fahombiazan'ny fitomboana sy ny fahavokarana. Raha misy tsy fahampiana vitamina, mineraly ary singa manaporofo. Rehefa manova fahazarana sakafo dia ampio ny biby amin'ny fahasitranana mandritra ny faharesen-dahatra. Ho fanampin'izany mandritra ny fitsaboana antibiotika. Fanoherana lehibe kokoa ny otrikaretina Ankoatr'izay mandritra ny fitsaboana na fisorohana aretina parasiteo. Ampitomboy ny fanoherana amin'ny alàlan'ny adin-tsaina. Noho ny vy be, vitamina ary singa ao anatiny, manampy ny biby hiady amin'ny tsy fahampian-dra izy io ary hanafainganana ny ...
Dosis ho an'ny fitantanana am-bava. Omby, ondry, osy ary kisoa: lanjan'ny vatana 1 tablet / 70kg. Fampitandremana manokana Tsy ampiasaina amin'ny fotoam-panomanana akoho amam-borona. Izy io dia mety hiteraka tsy fifandanjan'ny flora amin'ny tsinay, ny fanafody maharitra maharitra dia mety miteraka fihenan'ny vitamina B sy ny synthesis vitamina K ary ny fandraisana azy, tokony hanampy ireo vitamina sahaza azy. Fihetseham-po ratsy Ny fampiasana maharitra dia mety hanimba ny voa sy ny rafi-pitabatabana, hisy fiantraikany amin'ny fitomboan'ny lanja ary mety hitrangan'ny fanapoizinana sulfonamides. Fotoana fisintonana C ...
AdvaCare dia mpanamboatra GMP an'ny Levamisole Hydrochloride Boluses. Levamisole HCL Bolus dia kilasy simika fantatra amin'ny anarana hoe imidazothiazoles ary matetika no anthelmintika safidy mora vidy amin'ny biby fiompy. Matetika izy io dia ampiasaina ho toy ny sira klôloraly, ary indraindray amin'ny fosfat. Ny Levamisol HCL dia manilika ny fampiasana alika sy saka dia ambany noho ny amin'ny biby fiompy. Zava-dehibe ny manamarika fa ny lozam-pifamoivoizana levvaole AdvaCare dia ho an'ny tanjona ara-pahasalamana ihany, ny karazany izay ...
Ivermectin dia ao anatin'ny vondrona avermectins ary mihetsika manohitra ny kankana sy ny katsentsitra. Famantarana Ny fitsaboana ny boribory boribory vavony, ny moka, ny aretin'ny havokavoka, ny oestriasis ary ny scabies amin'ny zanak'omby, omby, osy, ondry sy kisoa. Contra-indications fitantanana ny biby mampinono. Vokany hafa rehefa mifandray amin'ny tany ny ivermectin dia mora miraikitra mafy amin'ny tany izy io ary lasa tsy miasa intsony rehefa mandeha ny fotoana. Ny ivermectin maimaim-poana dia mety hisy fiantraikany ratsy amin'ny trondro sy rano ...
Oxytetracycline dia an'ny vondrona tetracyclines ary mihetsika bakteriaostika amin'ny bakteria Gram-positive sy Gram-negatif maro toa ny Bordetella, Campylobacter, Chlamydia, E. coli, Haemophilus, Mycoplasma, Pasteurella, Rickettsia, Salmonella, Staphylococcus ary Streptococcus spp. Ny fiasan'ny oxytetracycline dia mifototra amin'ny fanakanana ny synthesie proteinina bakteria. Ny Oxytetracycline dia mivoaka amin'ny urine matetika, amin'ny ampahany kely amin'ny tsiranoka ary amin'ny biby mampinono amin'ny ronono. Ny tsindrona iray dia miasa ho an'ny t ...
Tylosin tsindrona 20%
Tylosin dia antibiotika macrolide misy fihetsika bakteriaostika manohitra bakteria Gram-positive sy Gram-negatif toa ny Campylobacter, Pasteurella, Staphylococcus, Streptococcus ary Treponema spp. sy Mycoplasma. Famantarana Ny aretim-bavony sy ny taovam-pisefoana ateraky ny zavamiaina bitika tylosin mora raisina, toa ny Campylobacter, Mycoplasma, Pasteurella, Staphylococcus, Streptococcus ary Treponema spp. amin'ny zanak'omby, omby, osy, ondry sy kisoa. Contra indications Ny fiheverana be loatra amin'ny ...
Levamisole dia anthelmintika synthetic miaraka amin'ny hetsika manohitra ny karazan-kankana gastrointestinal sy amin'ny lungworms. Ny Levamisole dia miteraka fitomboan'ny tonon-taolana hozatra arahin'aretin'ny kankana. Famantarana Prophylaxis sy fitsaboana ny aretin-kibo ary ny havokavoka toy ny: zanak'omby, omby, osy, ondry: Bunostomum, Chabertia, Cooperia, Dictyocaulus, Haemonchus, Nematodirus, Ostertagia, Protostrongylus ary Trichostrongylus spp. Kisoa: Ascaris suum, Hyostrongyl ...
Amin'izao fotoana izao dia manana mpiasa 216 manana mari-pahaizana oniversite na mihoatra ny orinasa, ka mahatratra 80% ny totalin'ny orinasa.
Taonjato iray velona, ​​mahery ny fiompiana, miroborobo ny fambolena
Ny R & D antsika
Karazana zava-mahadomelina vaovao nasionaly efatra, karazana patanty enina ary fomba fanomanana karazana patantin'ny famoronana no ampiharina.
Ny vokatra dia aondrana any amin'ny firenena 15 (Ethiopia, Sudan, Pakistan, Myanmar, Cameroon, Chad, sns).
Hebei Lihua pharmaceutical Co., Ltd. dia orinasa teknolojia avo lenta manokana amin'ny fampandrosoana, famokarana, varotra ary serivisy teknikan'ny fitsaboana biby, miaraka amina renivohitra voasoratra 80 tapitrisa yuan.
Miaraka amin'ny iraky ny "Zato Taona iainana, fiompiana matanjaka sy fanambinana ny fambolena", ny orinasa dia tapa-kevitra ny ho tonga mpamatsy vokatra iraisam-pirenena any an-toerana kilasy voalohany mifototra amin'ny teknolojia sy talenta.